Wararkii ugu dambeyay Qaraxii ka dhacey Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare | SNTV
Posted April 14, 2015 by Abdikarim in News
Wararkii ugu dambeyay Qaraxii ka dhacey Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare
Qaraxan oo sida la sheegay loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagu soo buuxiyay ayaa duhurnimadii maanta lagu weeraray dhismaha Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare oo ku taala degmada Hodan una dhow Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Wariye C/naasir Daahir Sabriye oo ka tirsan shaqaalaha Warbaahinta Qaranka oo qarax ka dib tagay goobta ayaa sheegay in Amniga dhismaha Wasaaradda ay si buuxda gacanta ugu hayaan Ciidanka amaanka Soomaaliya isla markaana ay toogteen maleeshiyaadkii isku dayay in ay gudaha u galaan dhismaha.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Agaasimaha guud ee waaxda Hidaha iyo Tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf uu ku dhaawacmay weerarkaasi.
Saraakiisha Caafimaadka ee Cisbitaalka Madiina ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay Cisbitaalka Madiina 15 ruux oo dhaawac ah.
Dadka ku dhintay weerarkan ayaa waxaa kamid ah Allaha u naxariistee Taliyihii ilaalada Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare oo lagu naaneeso Sandheere waxaana uu ka tirsanaa Ciidanka Boliiska Soomaaliya.
Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta sare ayaa hadda waxaa ay xarun u tahay Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya.
Ciidamada Amniga ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa gobta gaaray si ammaanka iyo kala dambeynta xarunta Wasaaradda u soo celiyaan.